Karatra miendrika voninkazo ho an'ny Andron'ny mpifankatia. Ahitana maodely maimaimpoana. | Asa tanana
Marian monleon | | asa-tanana, Asa-tanana ho an'ny fetin'ny mpifankatia
Androany aho dia tonga niaraka tamin'ny asa-tanana mahafinaritra, iray amin'ireo izay tsy nampoizina. Ho hitantsika eo ny fomba fanaovana karatra miendrika voninkazo ho an'ny Andron'ny mpifankatia. Avelako ho anao ny maodely maimaim-poana mba ho mora kokoa aminao ny manao azy.
Modely fanaovana sary.
Mainty mavo sy mena.
Sponjy na tampon.
Kasety / kasety manasa lamba.
Ny zavatra voalohany tsy maintsy hataonao dia pirinty ny modely amin'ny karatra DinA4 fotsy. (manana izany ianao amin'ny farany).
Apetaho eo amin'ny stencil ny loko. Ataovy amin'ny spaonjy izany amin'ny alàlan'ny fikapohana kely ary tsy ampiasana be dia be.
Lokoy ny endrika voninkazo mena sy ny faribolana ary mavo ny tantely, aza mampaninona anao ny miala, satria avy eo hokapainao manaraka ilay tsipika izy dia tsy ho hita.
Atsimbadika ny maodely ary loko mena akaikin'ny faritra misy ilay voninkazo.
Hetezo izao ny endriny manaraka ny tsipika ary hanana voninkazo mena ianao, faribolana mavo ary tantely iray.
avy eo lakaoly ny faribolana eo afovoany ny endrika voninkazo.
Araraoty ary Soraty ny hafatrao tsiambaratelo
Aforeto ny antsasany ny endrika voninkazo. Mijanona ao anatiny ny faribolana.
Sokafy ary aforeto perpendicular.
Aforeto indray ny afovoany, Hanana ny valiny voalaza ao amin'ny sary ianao.
Mihodina ary aforeto ny indroa voalohany izay nataoko, izany dia hanampy hanamora ny dingana manaraka.
Atambaro miaraka izay avo roa heny Araka ny hita eo amin'ny sary.
Chafa ka mivoaka ny endrika am-po.
Sarotra kokoa ny manazava azy noho ny manao azy, mila manaraka fotsiny ireo dingana amin'ny sary ianao dia hivoaka izany.
Omano ny antsipirian'ny haingon-trano. Anjaran'ny ny tantely
Ho an'ity apetaho ilay clip avy any aoriana miaraka amin'ny zotom-po.
Ary azonao atao izao mifatotra amin'ny endrika fo, hikatona.
Apetaho ny mololo Manampy anao amin'ny kasety fanasan-damba, raha apetrakao eo amboniny ny roa dia hosakanany tsy hihetsika izany.
Para ny ravina azonao atao ny mampiasa sombin-baoritra ary manapaka ny endrika.
Lakaoly amin'ny faritra afovoany.
Efa manana ny karatrao miendrika voninkazo homena ianao amin'ny andron'ny mpifankatia.
Ity ny modely:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » Fotoana manokana » Asa-tanana ho an'ny fetin'ny mpifankatia » Karatra miendrika voninkazo ho an'ny Andron'ny mpifankatia. Ahitana modely maimaim-poana.